PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-10-11 - Ootitshala, amabele, isondo kwanezisu
Ootitshala, amabele, isondo kwanezisu
Isolezwe lesiXhosa - 2018-10-11 - IINDABA - SITHANDIWE VELAPHI
YIMINYAKA evisayo, ootitshala abathile abangamadoda kwisikolo iSt Matthews kuQoboqobo, bexhaphaza ngezesondo abafundi ababhinqileyo kwesi sikolo – bekwenza oko ngokubavala umlomo, bebapha amanqaku ukuze baphumelele.
Kodwa kuthe xa kukhulelwa abafundi ababini, ngezityholo zokuba bamithiswe ngootitshala besi sikolo, abafundi abakhange baphinde bakwazi ukuzibamba – bangenela uqhankqalazo.
Kolu qhankqalazo, abafundi bebephethe amaphekepheke abhalwe ootitshala abarhintyeleka kulo mkhuba. Bonke aba titshala, kuquka nenqununu yesikolo, banqunyanyisiwe lisebe lezemfundo. Uphando ngakubo luyaqhuba kwaye kulindeleke ukuba luqosheliswe kule veki.
Imithombo ethembekileyo ixelele I’solezwe ngendlela aba titshala abebeziphethe ngayo. “Noxa nje bebahlanu abantwana abafake izikhalazo, okuvakalayo kukuba yinqwaba yabafundi ethe yaxhatshazwa ngezesondo ngaba titshala. Bebebalala emva koko babathembise ngokubapha amanqaku ukuze baphumelele kuloo mabanga bawafundayo,” utsho lo mthombo.
“Omnye umntwana ukhalaze ngelithi wabanjwa emabeleni ngutitshala, waphinda wabanjwa ngendlela engamkelekanga emathangeni. Xa ebuza ukuba kutheni ebanjwa ngolo hlobo, utitshala wancuma,” itsho ingxelo yalo mthombo.
Uphando lweSebe lezeMfundo luyaqhuba kwesi sikolo, apho abaphandi bebedlana iindlebe nabafundi.
Isithethi sesebe lezemfundo uMali Mtima, uthi ezi zizityholo ezinobuzaza kwaye bazithathele ingqalelo belisebe. UMtima uthi inkonzo yothuthuzelo lomphefumlo ngakubafundi abachaphazelekileyo iyaqhuba.
UMtima ukwathe izikhewu zootitshala abanqunyanyisiweyo sele zivaliwe lisebe ukuqinisekisa ukuba ukufunda nokufundisa akuchaphazeleki kwesi sikolo. Lo kaMtima ukugxininisile ukuba ukunqunyanyiswa kwaba titshala akuthethi ukuba banetyala.
Ilungu lebhodi elawula isikolo (SGB) uNomawethu Dyantyi Tali, uxelele ijelo likamabonakude ukuba yinto engamkelekanga le. “Kuba sithumele abantwana sicinga ukuba sibanika abazali abangootitshala kanti akunjalo. Le nto kudala isenzeka kwangethuba besingengomalungu eSGB. Ngoku soze iphinde yenzeke, igqibelisile,” utshilo uDyantyi Tali.
Abafundi baseSt Matthews kuQoboqobo ngethuba bengeniswe kwisibhedlele iSS Gida emveni kokuba besele amanzi angacocekanga